Shiinaha 5inch Car Polishher Polishing Machine 8mm Auto Wax Buffer DF8A saarayaasha iyo alaableyda | Checheng
Xirfad 150mm 6inch Bi ...
Tayada Sare 21mm Dual Acti ...
Iibinta Hot 15mm Dual Actio ...
5inch Car Polishher Polishing Machine Mashiinka 8mm Auto Wax Kaydinta DF8A
Shayga MAYA: CHE-DF8A
MOQ: 100 Cadad
Isticmaalka: Gawaarida Gawaarida
Muddada Bixinta: T / T
Muddada Ganacsiga: FOB
Qalabkeena Mashiinka DF8A wuxuu si gaar ah loogu sameeyay faahfaahinta, khafiifiyahaan, xoog badan oo DA wax lagu nadiifiyo waa macquul inay tahay soosaarayaasha waxqabadka laba geesoodka ah ee hordhaca ah. Waa awood ku filan xirfadle ahaan laakiin badbaado ugu filan bilowga. Waxaad ku guuleysan laheyd natiijooyin cillad la'aan la'aan howl adag. Waxaa loogu talagalay in lagu isticmaalo labada taariko ee 3 "(75mm) iyo 5" (125mm) labadaba, sidaas oo kale miisaanka miisaanka ayaa ka soo saaray warshadda taasoo ka dhigaysa mid siman oo si wanaagsan isugu dheellitiran. Iyada oo leh saxanka taakulaynta 5inch, waxaa loo isticmaali karaa shaqo faahfaahin maalinle ah, sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in lagu nadiifiyo kuwa adag in la gaaro aagga oo leh suufka taageerada 3inch kale. Waxay leedahay makiinad la isku halleyn karo oo 900W ah oo siineysa awood aad u wanaagsan oo ay ku qaado cadaadiska isla markaana dhaqso uga saarto cilladaha. Xakamaynta xawaaraha waxay siisaa xawaare isbeddel ah laga bilaabo 2500 illaa 6500 OPM, taas oo ka saarta calaamadaha wareegga iyo xoqida si deg deg ah oo nabdoon
Danab lagu qiimeeyay:
Xilligan la qiimeeyay:
Taageerada Tirada plate:
75mm (3 ”), 125mm (5”)
Qiyaasta suufka suufka:
4.0 mitir xadhig koronto
1pcs 3in saxan taageero 3p, 1pc 5in saxan taageero,
1pc khariidad, 1pc L-khariidad, buuga 1pc,
1pc D-Handle, 1pr buraashka kaarboon, 1pc fur + dhaqe
1 sano oo xaddidan oo ah cilladaha ku jira qalabka ama shaqada.
Astaamaha gaarka ah
1.Waxaa lagu qalabeeyaa miisaanka loo yaqaan 'CNC sax-mishiinka'.
Mashiinka 900W ee awoodda leh wuxuu si wax ku ool ah uga saaraa cilladaha si dhakhso leh wuxuuna hagaajiyaa dhalaalka rinjiga.
3.Habacsan oo si wanaagsan isu dheellitiran
Miisaanka 4.Light, fududahay in la qabto iyo hawlgalka.
Xawaaraha 5.Fast, oo waxtar badan u leh nadiifinta gaariga.
6.Soo qaadista xakamaynta 6-xawaaraha.
Nidaamka xawaaraha joogtada ah ee joogtada ah oo leh hawl bilow jilicsan.
8.Karboodyada dhinaca burushka kaarboonku waxay u fududeeyaan dadka isticmaala inay beddelaan buraashka kaarboonka.
J: 1. Waxaan nahay Alibaba oo la qiimeeyay 2 sano Dahab bixiye.
2. Waxaan nahay warshad soo saareysa polisers-ka oo leh 10 + sano oo khibrad ah soosaarka iyo soo saarista, awooda wax soosaarka ugu fiican, tayada ugu fiican, adeegga ugu fiican, iyo qiimaha tartanka.
S: Shahaadooyin noocee ah ayay alaabooyinkaagu haystaan?
J: CE, RoHS.
S: Ma leedahay habraacyo kormeer ka hor inta aanad rarin?
J: Haa, waxaan haynaa 100% QC kormeer inta aan la rarin.
S: Ma sameyn kartaa adeeg OEM ah?
J: Haa, amarka OEM waa la soo dhaweynayaa.
S: Waa maxay muddada dammaanaddaadu?
J: Waxaan u fidinaa damaanad-qaad 1-sano ah gawaadhida nalagu sifeeyo cilladaha soo saarista ama dhibaatooyinka tayada qaybaha. Fadlan noo soo dir sawirro iyo fiidiyowyo, farsamayaqaankeenna ayaa baari doona oo aqoonsanaya.
Hore: Mashiinka ugu dambeeya ee 5inch Electric Rotary Gawaarida Nadiifinta CHE-C6866
Xiga: 3inch 12mm Orbital Sander Mini Variable Speed ​​Speed ​​Dual Action Laba Buffer Polisher DF12A
Xirfad 150mm 6inch Big Orbit 25mm Dual Ac ...
Tayada Sare 21mm Dual Action Car Orbital Rando ...
125mm Portable 900W Portable Gawaarida Gawaarida Gawaarida ...
Naqshad Cusub Latest 900W 12mm Orbit Dual Action Car B ...
Waxqabadka Sare Shiinaha 25mm 900W Dheer Dheer ...
6 Inch Xawaaraha Isbedbedelka 21mm Random Car Polish Bu ...